Ny mpizahatany marina dia tsy mipetraka amin'ny trano fampiononana, na dia amin'ny ririnina aza. Ny lalana dia manintona azy ireo any amin'ny lemaka feno lanezy sy ny tendrombohitra rakotra lanezy. Ary mandritra ny ora maromaro manomboka amin'ny tendron'ny lanezy dia mila ski fotsiny ianao.
Ahoana ny fisafidianana ski ho an'ny fanatanjahan-tena?
Io tahirin-tsakafo ara-pizahantany manokana io dia misafidy tsara foana. Zava-dehibe ny handinihana ny anton-javatra toy ny fahamendrehana, ny fihenan-kery ary ny tsy fahampiana amin'ny hafanana (mitana lanezy).
Rehefa mifidy ski ho an'ny olona iray manokana, dia heverina fa ny halavany dia tokony hifanaraka amin'ny haavon'ny olona manana tanana natsangana. Ny kibay dia tsy maintsy manatratra ireo voay.
Safidy iray hafa amin'ny fisafidianana ny lavany dia ny haavon'ny olona mihoatra ny 10-15 cm, ary mora kokoa ny mifehy azy ireo mandritra ny fiakarana sy ny havoana, indrindra amin'ny kirihitra. Ny sticks kosa dia mety ho lava kokoa, fa ny ampahany dia handeha eny ambanin'ny lanezy.
Ho an'ny fitaovana famokarana, ny skis dia hazo sy plastika . Inona no tianao? Ao amin'ny magazay, modely maoderina dia aseho amin'ny vokatra plastika. Matetika ny hain-trano dia miseho avy amin'ny garazy sy ny tranom-paty, voaro tao ny ray aman-drenintsika sy ny tanora Sovietika.
Ny toeram-pijerem-pitaterana plastika lehibe amin'ny kalitao tsara toy ny "famenoana" dia mbola manana base de stock, plastika miasa ho toy ny "wrapper". Ny hazo ao amin'ny endriny madio, izany hoe tara fanongotra hazo, dia manana tombony sy tsy fahampiana. Noho izany, ny rakitra an-tsambo dia ahafahanao mihanika haingana kokoa amin'ny sary, nefa koa miala amin'ny lanezy izy ireo.
Ny sambo rehetra mpizahatany dia mizarazara ho mandeha an-tongotra, mihazakazaka ary mpizahantany. Ski universer, mety amin'ny fotoana rehetra, tsy misy. Noho izany ho an'ny karazana fitsangatsanganana tsirairay dia mila manana karazana ski ianao.
Toeram-pisakafoana ho an'ny fampiasana amin'ny lanezy tsy voakitika dia tokony hanana tohanana ampy sy ny fitazonana tsara rehefa manosika.
Aquapark any Yaroslavl
Inona no havoaka any Japon?
Restôranta any Petrozavodsk
Siramamy mipoitra ao an-trano
Karazana fitafiana Cher: tsy taona, fa toe-tsaina
Vavaka ho an'ny zaza vao teraka
Ny angano slavy sy ny Baiboly
Ankizivavy ho an'ny lohalika
Fiarovan-tena ho an'ny vehivavy 2013
Tavoahangy misy spinach sy cheese
Sakafo amin'ny nono
Manantena an'i Hilton ve i Paris Hilton?
David Bowie sy Iman
Ny fitsipiky ny lalao amin'ny "tanàna"
Laryngitis - fitsaboana any an-trano
Kafe amin'ny fahantrana
Masoivohon'i Sipra ao Okraina